Waxaad waydiisay: Wadamada Islaamku sidee ayay u kala sareeyaan? - Naadiga Muslimka
Xiiso ku saabsan Islaamka iyo bulshada Muslimiinta
Waxaad waydiisay: Wadamada Islaamku sidee ayay u kala sareeyaan?
Waa kee dalka Islaamka ugu wanaagsan caalamka?
Waa maxay mawqifka Islaamku ka taagan yahay aduunka?
Immisa waddan oo Islaam ah ayaa adduunka ka jira?
Diintee ugu awoodda badan?
Diinkee No 1 dunida ka ah?
Muxuu islaamku si degdeg ah ugu faafay?
Imisa nooc oo Muslimiin ah ayaa jira?
Immisa Muslimiin ah ayaa UK jooga?
Waa kuma hogaamiyaha shiicada islaamka?
Waa kuma boqorka islaamka?
Waa kuwee wadankii ugu horeeyay ee Islaam ah?
Wadankee Azan aan la ogolayn?
Muslimiinta ugu badan ee dal ku nool ayaa ku nool Indonesia, waa waddan ay ku nool yihiin 12.7% Muslimiinta adduunka, Pakistan (11.1%), Hindiya (10.9%) iyo Bangladesh (9.2%). Qiyaastii 20% Muslimiinta ayaa ku nool dalalka Carabta.
Maanta taageerayaashu Islam ka kooban yahay dunida kooxda labaad ee ugu weyn diinta. Qiyaastii 1.8 bilyan ama in ka badan 24% adduunka dadku waxay isu aqoonsan yihiin inay yihiin Muslimiinta. Islam waa diinta rasmiga ah ee 26 wadan ee Aasiya, Saxaraha ka hooseeya, Waqooyiga Afrika, iyo Bariga Dhexe.
Dabcan way jiraan 57 wadan oo islaam ah Adduunka oo Islaamku yahay diin dawladeed taasna ma inkiri karno.
Kooxaha diimeed ee ugu waaweyn
Masiixiyada 2.4 Bariga Dhexe
Islam 1.9 Carabta (Bariga Dhexe), qarnigii 7aad
Hinduism 1.2 Qayb hoosaadka Hindida
Budhiism 0.5 Qayb hoosaadka Hindida
Kuwa raacsan 2020
WAA XIISO: Caanaha organic ma xalaal baa?
Masiixiyada 2.382 bilyan 31.11%
Islam 1.907 bilyan 24.9%
Cilmaani/Diin/Diin/Diin La'aan/Diin La'aan 1.193 bilyan 15.58%
Hinduism 1.161 bilyan 15.16%
Sababo badan baa jira oo Islaamku si degdeg ah ugu faaftay. Markii ugu horraysay Maka waxa ay ku xidhnayd wadooyin badan oo ganacsi oo caalami ah. Sababta kale ee muhiimka ah waxay ahayd ciidankoodu dhul badan qabsaday. … Iyadoo saddexda arrimoodba ay muhiim yihiin, haddana waxa ugu badan ka caawiyay faafinta diinta xiriirka Maka iyo waddooyinka ganacsiga caalamiga ah.
In kasta oo ay tahay laba qaybood oo waaweyn Islaamka dhexdiisa, Sunniga iyo Shiicada, waxay ku heshiiyaan inta badan caqiidooyinka aasaasiga ah ee Islaamka, kala qaybsanaan qadhaadh oo u dhaxaysay labadooda waxay soo jirtay ilaa 14 qarni. Kala qaybsanaantu waxay ka dhalatay muran ku saabsan cidda beddeli lahayd Nebi Muxamed oo ah hoggaamiyaha caqiidada Islaamka ee uu soo bandhigay.
Islaamku hadda waa diinta labaad ee ugu weyn Boqortooyada Midowday ee Great Britain iyo Waqooyiga Ireland, natiijadii ka soo baxday tirakoobka Boqortooyada Ingiriiska 2011 oo lagu sheegay tirada Muslimiinta UK ee 2011 2,516,000, 4.4% tirada guud ee dadweynaha, halka dhawaan Xafiiska Tirakoobka Qaranka Ilaha waxay leeyihiin 2018 sida 3,372,966 ...
Waxay aaminsan yihiin in Ilaah doortay Ali in uu noqdo dhaxal-sugaha Muxammad, aan la khaldin, khaliifkii ugu horreeyay (khaliif, madaxa dawladda) ee Islaamka. Shiicadu waxay aaminsan yihiin in Muxammad uu Cali u magacaabay inuu beddelo amarka Ilaahay (Ciid Al Ghadir).
In 629, Muhammad wuxuu ku noqday Maka isagoo xoog qabsaday. Labadii sano iyo badhkii xigay, qabiilo badan oo Carab ah oo aan kala fogayn ayaa soo galay diintiisa. Dhimashadiisii ​​bishii Juun 8, 632, wuxuu ahaa taliyihii wax ku oolka ahaa ee koonfurta Carabta oo dhan, iyo adeegayaashiisii, ama xubnihiisa, waxay ka hawlgalayeen Boqortooyada Bari, Faaris iyo Itoobiya.
WAA XIISO: Ogolaanshaha xaaska koowaad ma lagama maarmaan ma u tahay guurka labaad ee Islaamka?
Pakistan waxa uu ahaa wadanki ugu horeeyay ee qaata sifada islaamka si uu wax uga badalo maqaamkiisa jamhuuriyada sida uu dhigayo dastuurkiisa cilmaaniga ah sanadkii 1956. Iyadoo ay jirto qeexidaas, dalku ma lahayn diin dawladeed ilaa 1973, markaasoo dastuur cusub oo dimoqraadi ah iyo cilmaani ka yar la ansixiyay. .
Saudi Arabia wuxuu faray masaajidda inay isticmaalaan cod-baahiyeyaasha Azan (oo loo yeedho salaadda) iyo ictiqaadka (oo ah baaqa labaad ee salaadda wadaagga).
Su'aashaada: Waa maxay sababta Kacbada aysan sanam u ahayn?
Anaga muslimka ah kuma caabudno sanamka Maka. Xitaa Idol kuma naqaanno.
Nizams ma Shiico baa mise Sunni?
In kasta oo Asaf Jahs (Nizams), taliyayaashii dawladii hore ee Hyderabad, ay ahaayeen Muslimiin Sunni ah, way sii wadeen.
Hormaro kee baa u horseeday waagii dahabiga ahaa ee Islaamka?
Saynis yahanadu waxay horumariyeen qaybaha aljabra, kalkulus, joomatari, kimistari, bayoolaji, dawo, iyo xidigiska. Qaar badan
Imisa jeer ayuu Dayaxa Qur'aanka lagu sheegay?
Quraanku ma xusay dayaxa? Quraanku wuxuu xooga saaray in dayaxu yahay a
Jawaab degdeg ah: khalku ma xalaal baa mise waa xaaraan?
Jawaab degdeg ah: Khalka khamriga iyo khalka balsamiga waxaa loo tixgeliyaa Xaaraam maadaama ay ku jiraan a
Jawaabta ugu fiican: Islaamku muxuu ka yidhi bogaadinta?
Maxaad dhahdaa marka qof kugu ammaano Islaamka? Si kastaba ha ahaatee, haddii qof ahaa
Maalin wanaagsan dhammaan! Magacaygu waa Caamir. Kani waa bloggeyga ku saabsan Islaamka iyo caalamka Islaamka. Boggeygu wuxuu yeelan doonaa maqaallo ku saabsan diinta Islaamka oo laga eegayo dhinaca diinta, sidoo kale waxaan ka soo qaadan doonaa culuumta kale sida daraasaadka diinta, cilmiga bulshada, cilmiga dhaqanka, cilmiga luqadda, iwm.
Waa maxay sayid Islaamku?
Su'aal: Goorma ayuu Islaamku qabsaday Ciraaq?
Muslimiintu miyay soomaan 24 saacadood inta lagu jiro bisha Ramadaan?
Waa kuwee magacyada muslimiinta ugu wanagsan?
Su'aasha soo noqnoqda: Maxay qoysasku qaban karaan ciida?
Su'aashaada: Waa maxay macnaha sanadka cusub ee Islaamka?
Su'aasha soo noqnoqota: Shiicadu ma rumaysnaa Qiyaas?
© 2022 Naadiga Muslimiinta